မြန်မာ့ရိုးရာသင်္ကြန်နဲ့ ဆင်တူတဲ့ ကမ္ဘာအနှံ့က ရေသဘင်ပွဲတော်များ - Myanmarload
29-Mar-2022 8am ·3months ago
နွေအလယ်မှာ မိုးဦးကို ကြိုဆိုရင်း ရေသဘင်ပွဲတော် ဆင်နွှဲလေ့ရှိတာ မြန်မာတစ်နိုင်ငံတည်းလို့ ထင်ရင် မှားသွားပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာနဲ့ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံအချို့မှာလည်း ရေနဲ့ ဆင်နွှဲတဲ့ ရိုးရာပွဲတော်လေးတွေ ရှိပါတယ်။ ပရိသတ်တွေ အပျင်းလည်းပြေ၊ ဗဟုသုတလည်း ရအောင် အဲဒီပွဲတော် ၆ ခုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
1. ထိုင်းနိုင်ငံက ဆုန်ခရမ် ပွဲတော်
ထိုင်းရဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက် အရမ်းအရေးပါတယ်လို့ ပြောရလောက်အောင် နာမည်အကြီးဆုံး ပွဲတော်တစ်ခုပါ။ နှစ်ဟောင်းကနေ နှစ်သစ်ကို အကူးမှာ ရေနဲ့ ဆေးကြောသန့်စင်တယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်လေးနဲ့ လုပ်တာမို့ မြန်မာနဲ့ အတူတူပါပဲ။
2. တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ဒိုင် (Dai) ရေဖြန်းပွဲတော်
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့တောင်ဘက်မှာ ကျင်းဟုန်ဆိုတဲ့ မြို့လေး ရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်နဲ့ နီးတဲ့ မြို့လေးပါ။ ၃ ရက်တာ ကျင်းပတဲ့ ဒီပွဲတော်လေးဟာ မြန်မာ့သင်္ကြန်ဆီက ကူးစက်ပျံ့နှံ့သွားတဲ့ ယဥ်ကျေးမှု ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
3. ကမ္ဘောဒီးယား နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်
သူ့နာမည်လေးက ခေါ်ရခက်တဲ့ Chaul Chnam Thmey ဖြစ်ပါတယ်။ သင်္ကြန်လိုပဲ ရေလောင်း ရေပက်ကြ၊ ဆိုကြ၊ ကကြနဲ့ ပျော်စရာကြီးပါ။ မုန့်လုံးရေပေါ်လိုမျိုး သူတို့ဆီမှာလည်း သင်္ကြန်စာလေးရှိပါတယ်။ အဲဒီမုန့်ကို ပဲရယ် အုန်းသီးရယ် ဆန့်မုန့်ရယ် ပေါင်းပြီး ဝါးကျည်တောက်လေးနဲ့ ပြန်ကင်ထားတာပါတဲ့။ စားချင်စရာလေးပဲနော်။
4. အာမေးနီးယားနိုင်ငံရဲ့ ဗာဒဗာပွဲ
သူတို့ကတော့ ကောက်သစ်စားပွဲအနေနဲ့ ကျင်းပတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗာဒဗာဆိုတာက နတ်ဘုရားမရဲ့ နာမည်ပါ။ ကောက်ပဲသီးနှံ အထွက်တိုးအောင် စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့ နတ်ဘုရားမ ဖြစ်ပြီး သူမဟာ နှင်းဆီပွင့်လေးနဲ့ ရေစင်သွန်းလောင်းပေးတယ်ဆိုတဲ့ ဒဏ္ဍာရီ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူမကို ပူဇော်တဲ့ အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ ရေစင်သွန်းလောင်းပြီး ပွဲကျင်းပတာ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
5. အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းက ရေသဘင်ပွဲတော်
အိန္ဒိယနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းမှာ မိုးဦးမကျခင် မိုးကို ကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့ ကျင်းပတဲ့ပွဲပါ။ Aadi Perukku ပွဲတော်လို့ အမည်ရပြီး ရေတံခွန်၊ ရေကန်၊ မြစ်ကမ်းနံဘေးတွေမှာ စားကောင်းသောက်ဖွယ်တွေ တည်ခင်းရင်း ရေကစားကြတဲ့ အစဥ်အလာလေးပါ။
6. တောင်ကိုရီးယား ရွှံ့ပွဲတော်
ရေပွဲတော်မဟုတ်ပေမဲ့ ရေနဲ့ နီးစပ်တဲ့ ရွှံ့တွေနဲ့ ပစ်ပေါက်ပြီး ဆော့ကစားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘော်ယောင်းပွဲတော်လို့ ခေါ်ကြပြီး ဘော်ယောင်းဒေသရဲ့ သတ္တုဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ ရွှံ့တွေကို လူသိများအောင် ကြော်ငြာဖို့ ကျင်းပရင်းကနေ အစဥ်အလာတစ်ခု ဖြစ်သွားတာပါ။
အခုပြောပြခဲ့တဲ့ ပွဲတော်လေးတွေကို ဖတ်ပြီး ကိုယ့်ရိုးရာ သင်္ကြန်လေးကိုလည်း လွမ်းနေကြပြီမဟုတ်လား။
Ref : https://swirled.com/best-water-festivals-around-world/